The nwere nke na agba nke ọhụrụ Apple TV billboards | Esi m mac
Naanị otu izu gara aga Apple wepụtara a mkpọsa mgbasa ozi iji kwalite ikike nke ọhụrụ Apple TV, nke a malitere na njedebe nke Ọktọba dị ka anyị niile maara. Mgbasa ozi ahụ na-aga n'ihu na ọkwa ọhụrụ. Ihe mmado ohuru a amalitela iputa n’obodo a United States jiri otu ụdị agba Apple jiri na-akwalite igbe kachasị elu ụlọ ọrụ ahụ. Nke a bụ foto osisi jiri bọọdụ mkpọsa Apple TV ndị a.
Dịka ihe ngosi gosipụtara site na webụsaịtị a maara nke ọma, akwụkwọ mmado Mgbasa ozi Apple TV egosila na obodo ndi Los Angeles, California, New York, New York, na Columbus, na Ohio.
O yikarịrị ka nke a ọ bụ mmalite nke ụlọ ọrụ Cupertino, ebe ọ na-akwalite Apple TV ọhụrụ n'ụdị, n'ihi na ha maara ikike ha nwere na aka, karịsịa na ihu nke Krismas ịzụ ahịa oge.
Echiche m bụ na ha nọ n'ụzọ ziri ezi na ndị ọrụ Apple niile jụrụ Apple. Enwere m Apple TV 3 ma nwee nnukwu ndakpọ olileanya, na ịhụ ọrụ na ụgwọ nke Apple TV ọhụrụ a nwere, Ọ na-eme m ka m cheghachi azụ ịzụ ya ọzọ. Naanị m ga-enweghi mkpebi ahụ enwere ike ịhụ DTT-style nke TV, ma ọ bụ na ọwa ịkwụ ụgwọ ya, ọ bụ ezie na asọmpi ahụ dị oke oke ịbanye na ọgba aghara ahụ. Na nke a njikọ, Onye anyị na ya na-arụ ọrụ Pedro mere nke ya unboxing nke Apple TV ọhụrụ a, ọ dịkwa egwu.
Si m si Mac anyi juo gi ajuju, Na-eme atụmatụ ịzụta Apple TV ọhụrụ maka ezumike ahụ?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » The nwere nke na agba nke ọhụrụ Apple TV billboards